Hairaha araka endrika amam-bika : Hampiranty ny vokatry ny fikarohana nataony i Temandrotra -
AccueilVaovao SamihafaHairaha araka endrika amam-bika : Hampiranty ny vokatry ny fikarohana nataony i Temandrotra
Hairaha araka endrika amam-bika : Hampiranty ny vokatry ny fikarohana nataony i Temandrotra
Mpanao hosodoko miezaka mampivoatra ireo kolotsaina avy any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy. Taorian’ny nandrombahany ny lokan’ny fifaninanana ho an’ireo zava-kanto maoderina « Paritana » tamin’ny taona 2016, anisan’ireo lokany ny fivahinianana famoronana tany Paris. Taorian’izay sy taorian’ny fampirantiana nataony tao amin’ny Cité Internationale des arts, dia miverina an-tanindrazana ary hampiranty ny vokatry ny fikarohana nataony i Temandrotra. Etsy amin’ny Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely no ahitana izany manomboka ny zoma ho avy izao, ary aharitra hatramin’ny 03 Febroary, ary nampisalorany ny lohateny hoe « Miroir » na « Fitaratra ». Fitaratra satria asehon’i Temandrotra amin’io fampirantiana io ireo sangan’asany vaovao sy ireo zava-bitany tany aloha, ka nanamarika ny lalana nodiaviny teo amin’ny sehatry ny hosodoko. Asehon’ireo sangan’asany ireo zava-misy any amin’ny faritra Atsimo sy ny kolotsaina Tandroy, izay hita taratra eo amin’ireo kojakoja ampiasainy, ireo sary famantarana samihafa, ny endriky ny sary…
Hatramin’ny nidirany teo amin’ny sehatry ny hosodoko tany amin’ny taona 1999, dia tsy nitsahatra ny nanolotra fampirantiana ho an’ireo liana amin’ny hairaha araka endrika amam-bika i Temandrotra. Nisy ireo niarahany tamin’ny mpanakanto hafa, nisy kosa ireo tsy nahitana afa-tsy ny sangan’asany. Ny taona 2006 no nanombohany ny fampirantiana irery, ary nisy hatrany izany isan-taona hatramin’ny taona 2016. « Nattes croisées » no fampirantiana voalohany nataony irery raha « voies de silences » no farany tamin’ny taona 2016. Ankoatra ny teto Antananarivo, dia firenena maro ihany koa no efa nandalovan’i Temandrotra sy ny talentany toa ny tany Belzika, Frantsa, Allemagne, La Réunion…
Efa voajerin’ny fitondram-panjakana avokoa ireo lesoka tokony hitondrana vahaolana hampisy fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Nisy ny drafi-pampandrosoana matipaika napetraka momba izany dia ny Pnd (Plan National de Développement). Iompanan’ny sehatry ny fampandrosoana amin’izany ny lafin’ny ...Tohiny